‘सल्लाहमै त्रिशूलीमा हेलियौं’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← वैदेशिक सहयोगमा खोइ स्पष्टता ?
त्रिशुली समाज युएईको सोनाम ल्होछार बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी पूरा। →
धादिङ – काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–४ थानकोटका विनय लामिछानेले ऋणले अत्तालिएपछि पत्नीसँग सल्लाह गरी सामूहिक आत्महत्याका लागि परिवारै त्रिशूली नदीमा हेलिएको बताएका छन्। खोलाबाट सकुशल उद्धार गरिएका लामिछानेलाई उद्धृत गर्दै उनले प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले आठ÷दस दिनअघि पत्नीसँग सल्लाह गरी छोराहरूसहित मर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए। पत्नी जमुना लामिछानेले पनि सँगै मर्ने बताएपछि बिहीबार साँझ दुई छोरासहित लामिछाने दम्पती त्रिशूलीमा हाम फालेका थिए।
जमुनाले पनि मिटरब्याज’bout फेसबुकमा लेखेकी थिइन्। ‘इम्गिर अनुमाज’ नामक फेसबुक एकाउन्टमा उनले घटनाको १२ दिनअघि मिटरब्याजमा पैसा लगाउने अनि ऋणीले भनेको समयमा तिर्न नसके दोब्बर, तेब्बर बनाउने अनि ऋणीलाई मर्न बाध्य बनाउने गिरोहलाई कारबाही गर्न थानकोटका डिएसपीलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
विनयको बयान र जमुनाको फेसबुक स्टाटस हेर्दा केही दिनअघि नै सामूहिक आत्महत्या गर्ने’bout दुईजनाबीच सल्लाह भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। विनय व्यवस्थापन विषयका ‘लेक्चरर’ हुन्। उनले मंगलोदय क्याम्पस व्यवस्थापन संकायमा पढाउँदै आएका थिए। बिहीबार सपरिवार धादिङको बेनीघाटस्थित त्रिशूली नदीमा हाम फाल्दा विनयले आफू बाँचे पनि पत्नी र दुई छोरा गुमाए।
घटना’bout थप अनुसन्धान भइरहेको छ। विनयले आफू बाँचेकोमा पछुतो मानेका छन्। उनलाई आइतबार जिल्ला अदालतमा ल्याइने प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए। विनयलाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। दुई नाबालक अझै बेपत्ता छन्।(नागरिक )
This entry was posted in संवेदना. Bookmark the permalink.